I-Falkland Islands kanye nohlu lwe-imeyili lweMalvinas | Database lakamuva Lokuposa
I-Falkland Islands kanye nohlu lwe-imeyili lweMalvinas
Database lakamuva Lokuposa » I-Falkland Islands kanye nohlu lwe-imeyili lweMalvinas
I-Falkland Islands kanye nekheli le-imeyili leMalvinas
I-Falkland Islands kanye nohlu lwe-imeyili lweMalvinas ukudala imikhankaso yakho yokuthengisa ngama-imeyili online. Ikhulukazi uhlu lwe-Falkland Islands kanye nohlu lwe-imeyili lweMalvinas oluzokusiza ukukhuthaza imikhiqizo yakho kuleli lizwe. Ithimba lethu lochwepheshe ngaso sonke isikhathi liqoqa ukumaketha kwe-imeyili okusha okuvuselelwa okuvela kumthombo ongakwazi ukwenza lutho. Yonke imininingwane yokuxhumana umuntu olungile ubuzile futhi waqinisekiswa ukuthenga isoftware yabantu neyenziwe ngokuzenzakalelayo. Kulula nje uchofoze inkinobho yokwengeza inqola bese izothumela kabusha ekhasini lokuphuma bese ubeka imininingwane yakho yokukhokha bese ukhokha le mali ngale database lapho uzothola ukufinyelela kokulanda kwaleli fayela le-imeyili Lists CSV noma i-Excel ongayisebenzisa ngokuqondile yesikhulumi se-CRM . Futhi, thina noma yiziphi izigidigidi zezentengiso ezibhekiswe kwi-imeyili zibala okudingayo. Ungenza noma ikuphi i-oda ngokwezifiso nezindawo zakho ezihlosiwe noma izigaba. Zama ikheli lethu le-imeyili lesampula lamahhala ngobufakazi besizinda. Ngakho-ke, siluhlu loluhlu lokukhangisa i-95% igxile ku-ROI.
Falkland Islands kanye nekheli le-imeyili leMalvinas Lists wonke amarekhodi afaka ukuba negama lokuqala, igama lokugcina, igama lokuxhumana, igama lebhizinisi, ikheli, idolobha, ikhodi ye-zip, izwe, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, nenombolo yefeksi nekheli lewebhusayithi. Ngakho-ke, thenga manje i-database yethu bese uqala umkhankaso wokukhangisa namuhla. Thola ikhasimende elihlosiwe kwesokudla okudingayo ekuhleleni kwakho kunyuka ngempumelelo.
Thenga Falkland Islands kanye Malvinas imeyili Marketing Database Lists
Amarekhodi wonke: 300
I-Falkland Islands neMalvinas Uhlu lwe-imeyili Umbuzo & Impendulo